RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester City guusha ka soo gaartay Middlesborough ee FA Cup – Gool FM
Valencia oo guul ay u qalantay ka gaartay Barcelona oo marti ugu aheyd garoonka Mestalla… +SAWIRRO
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester City guusha ka soo gaartay Middlesborough ee FA Cup
(Middlesborough) 11 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iska xaadirisay semi-final-ka tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay garaacday naadiga Middlesborough oo ay booqatay.
Kooxda tababare Pep Guardiola ayaa Middlesborough kaga adkaatay labo goo loo ay labadii qeybood ee ciyaarta kala dhaliyeen xiddigeheeda David Silva iyo Sergio Aguero.
>- Kooxda Boro lagu naanaysto ayaa kaliya hal gool dhalisay lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay.
>- Manchester City ayaa gaartay afar dhammaadka FA Cup ama semi-final-ka FA Cup markeedii saddexaad toban sano, labada horena waa 2011 iyo 2013, waxaana ay ku guuldarreysatay inay gaarto 1990 iyo 2000.
>- Pep Guardiola ayaa hadda gaartay semi-final ama afar dhammaadka dhammaan siddeed xilli ciyaareed oo uu kooxo soo maamulay.
>- Sergio Aguero ayaa u dhaliyey Man City 4 gool oo FA Cup-ka xilli ciyaareedkan, isagoo barbareeyey goolashiisii ugu fiicnaa kooxda hal olole.
>- Raheem Sterling ayaa 2 gool dhaliyey shan gool oo kalena caawiyey lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo uu FA Cup-ka u ciyaaray kooxdiisa Man City.
>- Raheem Sterling ayaa ku lug leh haatan 22 gool 35 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u ciyaaray Man City, 13 gool waa uu caawiyey halka uu dhaliyey 9 gool.
>- David Silva ayaa gacan ka geystay 5 gool oo FA Cup ah shantii kulan ee ugu dambeeyey oo uu tartankan ka soo muuqday waxa uu dhaliyey 2 gool isagoo dhiibay ama caawiyey 3 gool oo kale.
>- Man City ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 6 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan iyadoo ku ciyaaraysa bannaanka ama garoon kale, waana rikoodh cusub oo kooxda ah.
>- Man City ayaa unbeaten ah oo aan laga adkaan 11 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, kaliya saddex kulan oo qura ayeyna barbaro gashay, waxay dhalisay mudadaas 27 gool, waxaana laga dhaliyey 7 gool oo qura.
Man City oo u gudubtay afar dhammaadka FA Cup, kaddib markii ay garaacday Middlesborough… + SAWIRRO